Appinations: Yay Yihiin, Waa maxay iyo Kuwee Saamaynta Suuqgeynta | Martech Zone
Qaar ka mid ah aaladaha teknolojiyadda suuqgeynta waxay u egyihiin sida khamri wanaagsan maadaama ay sii wadaan kala furfuridda arrimaha dhibaatada ku haya suuqleyda. Appinies waxay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah barnaamijyadaas. Markii aan sameynay qoraal dhowr sano ka hor, waxay ahayd madal yar oo wanaagsan oo saameyn ku yeelatay mowduuc iyo qofba - aad u faa'iido badan waqtigaas. Sannado ka dib oo waa madal suuq-geyn dhameystiran oo gacan ka geysan karta horumarinta istiraatiijiyado nuxur u ah shirkadaha si ay ugu guuleystaan ​​maamulka suuqyada gaarka ah ee ay doonayaan inay raacaan.
Dib ugu soo noqoshada maalinta, iibka iyo suuqgeyntu waxay ahaayeen kuwo fudud. Macluumaadka kaliya ee macaamil macquul ah uu ku ogaan karo adigaa xakameeyay - marka hore si fudud adoo adeegsanaya xayeysiiskaaga (kahor internetka) ka dibna boggaaga. Iibinta ayaa markaa qaadan kara, buuxin doonta macluumaadka intiisa kale, oo xiri kara heshiiska. Maalmahan, taasi gebi ahaanba waa la rogay. Tirakoobyadii dhowaa waxay muujinayaan taas 60% safarka iibsadayaashu waxay dhacayaan kahor inta macaamilku uusan xitaa adiga kula soo xiriirin.
Taasi 60% waa waxa Appinions u yeerto suuq geyn aan la xakamayn - noocyadu ma aysan ogeyn waxa macaamiishooda suurtagalka ah ay ka aqrinayaan, halka ay ka aqrinayeen, yaa sheegaya waxa, malaayiin ka mid ah fikradaha ku saabsan calaamaddaada meesha taal ayaa muhiim ah, iwm. Ilaa hadda! - Appinions ayaa ku siinaya aragti taas oo kuu ogolaaneysa saamaynta dhammaan qodobbada taabashada macaamiisha cusub.
Mawduuc kasta oo la bixiyo, Appinions dusha yaa ka sheegaya waxa sheegaya, iyo mid ka mid ah fikradahaas ayaa runtii muhiim ah. Appinions ayaa galaya tobanaan milyan oo maqaal maalin kasta, oo falanqeynaya kuwaas oo ayaa leh waa maxay ku saabsan taas oo mawduucyada, oo ku saleysan sanado cilmi baarista luuqada dabiiciga ah ee Cornell. Dhibcaha xogtu waxay gaaraan dhammaan falcelinta khadka tooska ah, khadka tooska ah, ilaha wararka dhabta ah, telefishanka, iyo warbaahinta bulshada.
Suuqgele ahaan, markaa waxaad ku sameyn kartaa dhowr waxyaalood oo waaweyn xogtaas. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la xiriirto kuwa saamaynta ku leh oo aad ka dhaadhiciso badeecadaada. Ama waxaad u adeegsan kartaa xogta mowduuca (ie waa maxay waxyaabaha ay dadku ka hadlayaan taas oo dib u soo celinaysa) si aad u toosiso istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabahaaga. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho dad ku hadla munaasabad. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad cabirto guusha soosaarista wax soo saar, iwm.
Xogta Saameynta Buuxda
Tags: magacyoxogta saamaynta tartankasuuqgeynta suuqgeyntamadal suuq geyn saamayn lehwaxyaabaha saameynta ku lehfalanqaynta dareenkamuraayada mawduuca
Jul 19, 2011 markay tahay 10:05 PM
Tani waa mid xiiso leh. Waan hubin doonaa. Waan ku raacsanahay fikradahaaga ku saabsan Klout.
Muuqaalkaasi waa quruxsan yahay!
Aug 7, 2014 at 11: 43 AM
Waxaan baaray oo aan tijaabiyey waxyaabo badan oo saameyn ku leh suuqgeynta suuq-geynta markii aan wada-qoraayo Suuqgeynta Saameynta: Sida loo Abuuro, loo Maareeyo, loona Cabbiro Saameeyayaasha Sannadkii hore, intaas ka dibna waxaan ku kalsoonahay inaan idhaahdo 'Appinions' waa mid ka mid ah shirkadaha ugu ballaadhan dhufto ee la heli karo. Aad loogu taliyay.
Agoosto 7, 2014 saacaddu markay ahayd 2:01 PM
Sam - aad baad ugu mahadsantahay qoraalka. Dadka waayeelka ah ee doonaya inay akhriyaan buugga ku saabsan Suuqgeynta Saameynta - hubso inaad soo qaadato buugga Sam! Suuqgeynta Saameynta: Sida loo Abuuro, loo Maareeyo, loona Cabbiro Saameeyayaasha Sumadda ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada (Que Biz-Tech)